26 / 12 / 2020 /i Fibromyalgia, rheumatism /av ewute
Ọtụtụ ndị nwere fibromyalgia na-emetụtakwa ọrịa osisi fasciitis. N'isiokwu a, anyị leruru anya na njikọ dị n'etiti fibromyalgia na plantar fasciitis.
Osisi fascia bụ efere aka n'okpuru ụkwụ. Ọ bụrụ na nsogbu adịghị, mmebi ma ọ bụ mbufụt na-eme na nke a, a na-akpọ ya plantar fasciitis. Nke a bụ ọnọdụ nwere ike ibute mgbu n'okpuru n'okpuru ụkwụ gị na n'ihu ikiri ụkwụ. N'ebe a, anyị ga, n'etiti ihe ndị ọzọ, ga-esi gafere njikọ anụ ahụ nwere njikọ mgbu (fascia) nwere ike jikọta ya na fibromyalgia.
Ezi ndụmọdụ: Na ala nke isiokwu ị nwere ike ịlele vidiyo na mmemme ọzụzụ megide plantar fasciitis. Anyị na-enyekwa ndụmọdụ banyere njide onwe onye (dịka plantar fasciitis mkpakọ sọks)
N’isiokwu a ị ga-amuta ihe banyere:
Gịnị bụ Plantar Fascitis?
Ahụhụ Fascia na Fibromyalgia Na-enwe Mgbu
Mmekọrịta dị n'etiti Fibromyalgia na Plantar Fascitis
Onwe gị megide Plantar Fascitt
Omume na Ọzụzụ megide Plantar Fascitis (gụnyere VIDEO)
Na foto nlele dị n’elu (Isi mmalite: Mayo Foundation) anyị nwere ike ịhụ etu esiri gbasawanye sitere na nkwonkwo ụkwụ ya wee gbakwunye ya n’ikiri ụkwụ. Osisi fasciitis, ma ọ bụ osisi fasciosis, na-eme mgbe anyị nwetara usoro anụ ahụ na-emerụ ahụ na mgbakwunye na n'ihu ọkpụkpụ ikiri ụkwụ. Ọnọdụ a nwere ike ịmetụta onye ọ bụla nọ n'ọgbọ ọ bụla, mana na-echekarị na ọ ga-eme ọkachasị ndị na-agbatị ụkwụ ha nke ukwuu.
Ọrụ kachasị nke plantar fascia bụ iji belata ibu ọrụ mgbe anyị na-eje ije. Ọ bụrụ na nke a mebie, na enweghịkwa usoro iji rụọ ọrụ, ị nwere ike ịga na plantị fasciitis maka ogologo oge. Ọbụna ụfọdụ na-eje ije na usoro obi ọjọọ na-adịghị ala ala ebe mmebi ahụ na-apụta ugboro ugboro. Okwu ikpe ndị ọzọ dị ogologo nwere ike ịdịgide ruo afọ 1-2. Ọ bụ ya mere o ji dị oke mkpa na mmemme, gụnyere ọzụzụ onwe onye (ịgbatị na mgbatị ike dị ka egosiri na vidiyo dị n'okpuru) na njide onwe onye - dịka ndị a plantar fasciitis mkpakọ sọks nke na - eme ka mgbasa ọbara na - ebute mpaghara merụrụ ahụ (njikọ ahụ ga - emepe na windo ọhụrụ).
Ọmụmụ ihe edepụtara ihe nrịanya mgbu na-emetụta ihe jikọrọ anụ ahụ (fascia) na ndị metụtara fibromyalgia (1). Enwere ihe akaebe, dị ka a kpọtụrụ aha n'elu, na enwere njikọ n'etiti adịghị arụ ọrụ nke njikọ njikọta intramuscular na ụba mgbu na ndị nwere fibromyalgia. Nke a nwere ike ịkọwawanye ụba nke:
Ahụhụ Epicondylitis Medial (Golf Elbow)
Epicondylitis na-efe efe (Tennis Elbow)
N'ihi ya, ọ nwere ike ịbụ n'ihi usoro ọgwụgwọ na-adịghị arụ ọrụ na ndị nwere fibromyalgia - nke n’aka nke ya na - ebute nsogbu na nsogbu na - alụ ọgụ ma mmerụ ahụ na akwara na akwara. N'ihi ya, nke a nwere ike iduga ogologo oge nke ọnọdụ ndị dị otú ahụ ma ọ bụrụ na fibromyalgia emetụta mmadụ.
Njikọ dị n'etiti Plantar Fascitis na Fibromyalgia
Anyị nwere ike ileba anya na isi ihe atọ kpatara enyo enyo na a na-enyo enyo nke fasciitis plantar n'etiti ndị nwere fibromyalgia:
Allodynia bụ otu n’ime ha ihe mgbu asaa a maara na fibromyalgia. Nke a pụtara na mmetụ na obere nrịanrịa mgbu, nke na-agaraghị emerụ ahụ ọfụma, na-asụgharị ya n'ụbụrụ - ma si otú a nwee mmetụta dị njọ karịa ka ha kwesịrị ịdị.
Belata Agwọ na Njikọ Njikọ
Ọmụmụ ihe anyị kwuru na mbụ lere anya n'otú ihe ndị na-emepụta mmiri ọgwụ si gosipụta mmezi usoro mmezi na akwara na njikọta njikọta n'etiti ndị nwere fibromyalgia. Ọ bụrụ na ọgwụgwọ ahụ dị nwayọ nwayọ, mgbe ahụ a ga-achọkwa obere nsogbu tupu ị nweta mmeghachi omume mmerụ ahụ na-egbu mgbu na mpaghara emetụtara.
Mmeghachi omume na-afụ ụfụ
Nnyocha ndị gara aga egosiwo na fibromyalgia bụ jikọtara ya na mmeghachi omume mkpali siri ike n'ime ahụ. Fibromyalgia bụ nro anụ ahụ nchoputa rheumatic. Osisi fasciitis, ntụgharị mbufụt nke akwara ụdọ n'okpuru ụkwụ, si otú a na-egosi na ọ ga-enwe njikọ chiri anya na ọgwụgwọ na mbelata mmeghachi omume. Kpamkpam n'ihi nke a, ọ dị mkpa karịa na mgbasawanye ọbara na-erugharị n'ụkwụ na ụkwụ maka ndị na-arịa ọrịa anụ ahụ dị nro. Uwe mkpakọ, dị ka plantar fasciitis mkpakọ sọks, Ya mere, nwere ike rụọ ọrụ dị mkpa n'ịlụso fasciitis plantar ọgụ na ìgwè onye ọrịa a.
Anyị ekwuola otú mmụba mkpali na-arịwanye elu ma belata ọgwụgwọ nwere ike ịbụ akụkụ nke njikọ dị n'etiti osisi fasciitis na fibromyalgia. Ngwakọta a nke ihe ndị na-adịghị mma na-eme ka e mepụta anụ ahụ mebiri emebi na mgbakwunye akwara na nsọtụ ihu nke ọkpụkpụ ikiri ụkwụ. Na nwute, ọ bụkwa ya bụ na ukwu ụkwụ abụghị mpaghara nwere oke nrugharị ọbara nke ọma na mbụ. Ọ bụ nrugharị a na-ebute nri, dịka elastin na collagen, na mpaghara maka ndozi na ndozi.
Usoro dị mfe ị ga - eme iji bulie mgbasa ọbara bụ:
Ojiji kwa ụbọchị nke Plantar Fascite Compression Socks (nke na-enye nsogbu n'akụkụ aka nri na ụkwụ)
Omume kwa ụbọchị (lee vidiyo n'okpuru)
Ọgwụgwọ Plantar Fascitis
Ọ dị mkpa na nyocha zuru oke na ọgwụgwọ nke osisi fasciitis. Dịka ọmụmaatụ, nkwonkwo ụkwụ ụkwụ (obere mbugharị na nkwonkwo nkwonkwo ụkwụ) nwere ike inye aka na mbido ibu na ndị ọrụ ụkwụ - ma si otú a bụrụ ihe na-ebufe akwara aka nke ụkwụ. N'ọnọdụ dị otú a, ọ ga-adịkwa mkpa na nchịkọta ọnụ nke nkwonkwo ụkwụ na nkwonkwo ụkwụ iji nye aka na ibu ziri ezi. Nke edo edo na nhazi nke plantar fasciitis anyị hụrụ yew Shockwave Agwọ. Nke a bụ ụdị ọgwụgwọ eji arụ ọrụ kacha mma edepụtara megide plantar fasciitis. A na - ejikọ ọgwụgwọ ahụ yana nchịkọta ọnụ nke hips na azụ ma ọ bụrụ na achọpụtara nrụrụ na ndị a. Usoro ndị ọzọ nwere ike ịgụnye ọrụ muscular nke akọwapụtara na akwara nwa ehi.
Na-enwe Nsogbu Plantar Fascitis Ogologo Oge?
Obi dị anyị ụtọ inyere gị aka nyocha na ọgwụgwọ n'otu ụlọ ọgwụ anyị nwere mmekọ.
Anyị mmekọ Clinics
Omumu na Ọzụzụ megide Plantar Fascitis
Usoro ọzụzụ megide plantar fasciitis na-ezube ime ka ọbụ ụkwụ na nkwonkwo ụkwụ ya sie ike, n'otu oge ka ọ na-agbatị ma mee ka akwara aka gbanwee. Omume ụlọ gị nwere ike ịhazi gị site n'aka physiotherapist, chiropractor ma ọ bụ ndị ọkachamara ahụike ọzọ dị mkpa.
Na vidiyo dị n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ mmemme mmemme na mmemme 6 megide plantar fasciitis. Gbalịa onwe gị ntakịrị - ma megharịa dabere na akụkọ ahụike gị na ụdị ụbọchị gị. Agbanyeghị, ọ dị mkpa icheta na ọ na - ewe oge iji dozigharịa anụ ahụ mebiri emebi n'okpuru ụkwụ - yana ị ga - akwadebe ime mmemme ndị a opekata mpe 3-4 ugboro n'izu karịa ọtụtụ ọnwa iji hụ nkwalite. Na-agwụ ike, mana nke ahụ bụ ụzọ ọ dị na osisi fasciitis. Enwere ike ịkpọtụrụ anyị na ngalaba ndị dị n'okpuru isiokwu ma ọ bụ na ọwa Youtube anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ị chere na anyị nwere ike inyere gị aka.
VIDIO: Ihe ngosi isii megide Plantar Fascitt
Bụrụ ezinụlọ! Enwere ike ịdenye aha n'efu na ọwa Youtube anyị (pịa ebe a).
Isi mmalite na References:
1. Liptan et al. Fascia: Njikọ na-efu na nghọta anyị banyere ọrịa nke fibromyalgia. J Isi Mov Ther. 2010 Jan; 14 (1): 3-12. ma ọ bụ: 10.1016 / j.jbmt.2009.08.003.
Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere Sacroilitis [Nnukwu Nduzi] Fibromyalgia na Ckwụ Cramps